ခေါင်းဆောင်မှုအကျပ်အတည်း ( Leadership Crisis) ကို ဒီလှိုင်းက ပြောပြနေသလား ..? – MoeMaKa Burmese News & Media
ဒီလှိုင်းစာစောင်တွေကို ကျနော် တလေးတစားဖတ်ပါတယ်၊ သိမ်းပါတယ်၊ (ကျနော် ပါတီဝင်မဟုတ်ပါ)၊ ဒီနေ့နောက်ဆုံးရောက်လာတာက တနှစ်ပြည့်တဲ့စာစောင်ပါ၊၊ အတွဲ (၂) အမှတ် ၂ တဲ့၊၊ အဘ ဦးဝင်းတင်ဆောင်းပါးအရဆို ၅၂ စောင်ရှိသွားပြီပေါ့၊၊
ဒီလှိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော် မိတ်ဆွေတွေက “အဘိုးကြီး အဘွားကြီး စာစောင်ပါ” လို့ ငေါ့တော့တော့ ပြောတာ ကြာပြီး၊ ရှေ့ဖုံးမှာ ဒေါ်စု၊ နောက်ဖုံးမှာတော့ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦးပေါ့၊ သူတို့က ဒါကို သရော်တာပါ။
ဒီလှိုင်းက ပါတီစာစောင်ဆိုတော့ ပါတီဝါဒဖြန့်ချီရေးပေါ့ဗျာ၊၊ ဒါက ရှင်းပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဘ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ ဒီစ ကား ကဏ္ဍကိုတော့ အလေးထားဖတ်ပါတယ်၊ ထားတော့၊
တနှစ်ပြည့်သွားတော့ စာစောင်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်းအဖုံးမှာ ဒေါ်စုကို ပြုံးလျက်တွေ့ရတယ်၊ ဒေါ်စု ကျက်သရေရှိတယ်၊ အရွယ်နဲ့ မမျှအောင် အရွယ်တင်တယ်။ ကျန်းမာနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ အသက် ၆၇ နှစ်ရှိနေပြီဗျာ၊ ၇၀ ထဲရောက်နေပြီ၊၊
ဒီနေ့တော့ ကျနော့် မိတ်ဆွေတွေ ပြောတဲ့ “အဘိုးကြီး အဘွားကြီး စာစောင်”ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျနော် အလေးအနက်စဉ်းစားဖြစ်တယ်။
တနှစ်အတွင်း ထုတ်ခဲ့တဲ့ ၅၂ နှစ်စောင်မှာ ဒေါ်စု မျက်နှာဖုံး မပါတဲ့ စာစောင် ဘယ်နှစ်စောင်ရှိမလဲ၊ ကျနော် သိမ်းထားတဲ့အထဲ ပြန်ရှတော့ တစောင်မှ မတွေ့ဘူးဗျာ၊၊ တချို့ ကျနော့်ဆီ မရောက်တဲ့ စာစောင်တွေမှာရော၊၊ ??? ကျနော် မသိ၊၊ ကျနော်တော့ သိပ်မထင်။။
ဒီကိစ္စက ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားလို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်၊ အန်အယ်ဒီမှာ Leadership Crisis ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ပဲ၊ ဆိုလိုတာက ခေါင်းဆောင် ရှားပါးနေပြီ၊ ဒေါ်စု၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင် အလွန်မှာ ပါတီကို ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင်ကြမှာလဲ၊
အန်အယ်ဒီဆိုတာက သာမန် နိုင်ငံရေးပါတီမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့၊ လူထုပါတီဖြစ်နေတယ်၊၊ အန်အယ်ဒီရဲ့ Leadership Crisis ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်း ဆောင်မှုအကျပ်အတည်းဖြစ်နေတယ်။ တိုက်ပွဲတွေထဲက ခေါင်းဆောင်ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့ ယျေဘုယျ သဘောတရားကို ကျနော်တို့ ပုံသြထားသင့်သလား၊၊ ကျနော်တော့ သိပ်သဘောမကျလှ။
ကျနော် မှတ်သားဖူးတဲ့ ခေါင်းဆောင်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ Nature နဲ့ Nurture၊၊ ပင်ကိုယ်ခေါင်းဆောင် အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင် နဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ရင်းနဲ့ ထွန်းပေါက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်၊
ကျနော်တို့ဆီမှာ ပေါ်သမျှ ခေါင်းဆောင်တိုင်းက Nature ခေါင်းဆောင်တွေများနေတယ်၊၊ တိုင်းပြည်ရှေ့ရေးအတွက် Nurture တွေလည်း စဉ်းစားကြဖို့ ခေါင်းဆောင်တွေကို မေတ္တာရပ်ချင်ပါရဲ့။။
ဒီလှိုင်းတနှစ်ပြည့်မှာ အမာခံ ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ ဒါလေးတော့ အကြံပြုချင်ပါတယ်၊၊
← ဘ၀ပျက် ခံတွင်းခါးသက်ခြင်း
ဦးသန့် (၁၉ဝ၉ – ၁၉၇၄)၊ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် (၁၉၆၁ – ၁၉၇၁) →
တူမောင်ညို – သူရနဲ့ သူရဦးအောင်ကို ပျော့ပျောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ
One thought on “ခေါင်းဆောင်မှုအကျပ်အတည်း ( Leadership Crisis) ကို ဒီလှိုင်းက ပြောပြနေသလား ..?”
သွါးတာပါ။အာဏာ နေရာဆိုယင် ပြောသူကော ကြားသူရော ထော်လော်ကန်.လန်.ကြီးဖြစ်နေတုန်းရှိနေကြသေး